China Gallic Acid (Industrial Giredhi) Mugadziri uye Mutengesi | Sanjiang
Chigadzirwa zita: Gallic acid (Yegiredhi giredhi)
Zvishandiso / nzira dzekushandisa: Ichi chigadzirwa chinoshandiswa zvakanyanya mumishonga, dhayi, kemikari uye organic synthesis maindasitiri, uyezve nekuongororwa kwesimbi isingawanzo.
Pamusoro peRudzi, musika weGallic Acid wakakamurwa kuita giredhi reFarma, Giredhi rekudya, Giredhi remaindasitiri, Giredhi reMagetsi. Pharma Giredhi rinotonga pasi rese Gallic Acid nekuda kwekushandisa kweGallic Acid seyakajairwa kuona phenolic zvemukati meongororo mumishonga yemishonga. Zvakare, seye antioxidant, Gallic acid inokwanisa kudzivirira muviri kurusununguko rwemahara uye kukuvara kweiyo oxidative uye anti-anogumbura maficha eGallic acid inoita kuti inyanye kubatsira sezvo hosha dzehutano dzakawanda dzichibva mukuzvimba Izvi zviito zvinorwisa kuzvimba zvakawanikwa zvichikosha zvinopesana nehutachiona zvakare.
1. Inoshandiswa seye astringent uye yemukati hemostatic mumiriri mune weti system mumushonga.
2. Inoshandiswa kugadzira inki yebhuruu yekusingaperi.
3. Inoshandiswa semubatsiro wekushandisa mukudhinda stencil uye kudhinda kwemagraphic.
4. Ichi chigadzirwa chinoshandiswa semufananidzo wekuvandudza rubatsiro.
5. Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa yesirivha halide mhinduro mukutora mifananidzo kuti uwane kugadzikana kwenguva refu kwekuchengetedza uye kubvisa dambudziko risinganzwisisike pane chisina kunaka.
6. Ichi chigadzirwa inhengo yekubatanidza yecyanoacrylate adhesives.
7. Inoshandiswa mukugadzira uye kugadzira bvudzi kugadzirira.
8. Ichi chigadzirwa chinoshandiswa se colloidal stabilizer mukugadzira mativi.
9. Ichi chigadzirwa chinoshandiswa senge mordant mukugadzirwa kwemapepa ane mavara uye mavara fiberboard.
10. Kuwedzera 0.01-0.04% nekurema kwesesquitic acid kune gypsum-based kuvaka grid fomula kunogona kuwedzera simba rayo.
11. Inoshandiswa seyekuongorora reagent yea alkaloids, simbi uye inorganic acids.
Pashure: Gallic Acid （Magetsi Giredhi)
Maindasitiri Giredhi Gallic Acid